Luiza Grigorova - မင်းသမီး, မော်ဒယ်နှင့်ထုတ်လုပ်သူ - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
Luisa Grigorovаရုပ်ရှင် "Black ကဖိုင်များ" ၏တခုမင်းသမီး, မော်ဒယ်နှင့်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်အများပြည်သူလူသိများသည်။ ပူးပေါင်းကြံစည်မှုအဖွဲ့အစည်းများ, လူကုန်ကူးမှုနှင့်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများသည်ဇာတ်ညွှန်းအတွက်အဓိက themes များဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါရိုက်ကူးရေးများအတွက်, သို့သော်အဖွဲ့သည်သူတို့ဒါခေါ်ပေမယ့ platform များမှတဆင့်စုဆောင်းရန်ကြိုးစားနေသည့်ရန်ပုံငွေများလိုအပ်နေပါသည်။
ဒီနေ့နဲ့သင့်ပါတယ်နောက်တော်သို့လိုက်ခံရဖို့ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်သူလူငယ်တစ်ဦးကမိန်းကလေးရဲ့ရည်မှန်းချက်, မျှော်မှန်းချက်များနှင့်အိပ်မက်များအကြောင်းကို Luisa နှင့်အတူစကားပြောနေကြသည်။
အများအားဖြင့်သင်သည်ရည်ညွှန်းထားတဲ့အနည်းငယ် adjective နာမဝိသေသနကိုအသုံးပြုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖော်ပြပါ။
ကြှနျတေျာ့စိတျထဲရောက်လာကြောင်းပထမဦးဆုံး adjective နာမဝိသေသနတွေဟာ: အထိခိုက်မခံနာမငြိမ်, စစ်သွေးကြွ, ပြောင်းလဲ, ပြုံး, ငို, တဖန်ပြုံး, ရှုပ်ထွေး ...
© Velislava Kaymakanova
သငျသညျအစာကိုအကြောင်းဂီတတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက် - "ငါ့ကိုစားပါ။ " ဘယ်လိုသင်စီမံကိန်းကိုပူးပေါင်းကြောင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလဲ
ဘယ်လို Nigel ရိုင်းစိုင်းတဲ့, ရုပ်ရှင်အတွက်သရုပ်ဆောင်များကိုတစ်ဦးနှင့်သင်သည်အဘယ်သို့သူ့ထံမှသင်ယူခဲ့ကြနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ပါသလဲ
©က Black Files; နံရံကပ်ကြော်ငြာ
သငျသညျက Black ဖိုင်များ၏ထုတ်လုပ်သူများမှာ! ဤစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်. ငါတို့စာဖတ်သူတွေကိုပြောပြပါ! စိတ်ကူးကိုသင်မည်သို့အခါဖြစ်ပွားခဲ့သည်ခဲ့တာလဲ
ဒါကအခုကို up-to-date ဖြစ်အောင်သောခေါင်းစဉ်အပေါ်တစ်ဦးရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါသည် - ကအကြမ်းဖက်ဝါဒအကြောင်းဖွဲ့စည်းရာဇဝတ်မှု, လူကုန်ကူးမှု, မုသာစကားအရေးယူဖြစ်ပါတယ် ... ဒီကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကြည့်ရှုသူများဖမ်းယူလိမ့်မယ်တဲ့ပုံပြင်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ ငါတို့မှာရှိတယ် တစ်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစတင် ကျနော်တို့ငါတို့ဥစ်စာ၏ဤစီမံကိန်းကို်လင်းစေနိုင်အောင်လူတိုင်း, ကျွန်တော်တို့ကိုဒေါ်လာငွေအနည်းငယ်ပေးပို့ဝင်နိုင်ပါတယ်ရှိရာ site ကို indiegogo.com, ပေါ်မှာ။
© Luisa Grigorovа
Black က Files တွေကို related ဥစ္စာ၏အများဆုံးရဲအိပ်မက်ကဘာလဲ?
ကျွန်မပြင်းပြင်းထန်ထန်တစ်ဦးသောသူသည်မိမိအိပ်မက်ကဲ့သို့ကြီးမားသောကြောင်းယုံကြည်, ငါကြီးမားတဲ့အတိုင်းအတာအတွက်က Black ဖိုင်များ၏အိပ်မက်မက်ဖို့မကြောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုဒါကြောင့်ပါပဲ။
အခါသင်မည်သို့သူတို့ကိုအသုံးချပါလိမ့်မယ်သို့မရောက်မှီတိုင်အောင်, သင်သည်စုဆောင်းဖို့ငွေဘယ်လောက်လိုအပ်သလဲ? ရုပ်ရှင်၏ထုတ်လုပ်မှုအနေနဲ့စျေးကြီးပျော်မွေ့သည်အဘယ်ကြောင့်, ဒီပတ်ဝန်းကျင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်သောလူကိုပြောပြပါ?
, ရဟတ်ယာဉ်ကနေပစ်ခတ်အပါအဝင်အရေးယူမြင်ကွင်းများ၏ရှေ့မှောက်တွင်, နှင့်တကွ, အရည်အသွေး, ရုပ်ပုံနှင့်ကျွန်တော်လိုခငျြအသံနှင့်အတူကားများ, position နဲ့ဆက်ဆံ, ကြီးမားတဲ့လမ်းအပိုင်းပိတ်ပြီးထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကျိုးကပိုသောအရာတို့ကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဖို့ကောင်းသောသရုပ်ဆောင်တွေကိုရွေးချယ်ပါရန်, ရန် ရှည်လျားသောအလုံအလောက်ပဏာမပြင်ဆင်မှုနှင့်လုံလောက်အောင်ကောင်းသောအရည်အသွေးတစ်ခု post-ထုတ်လုပ်မှုရှိသည် - အမေရိကတွင်ဤအမှုအရာလုပ်ဖို့ကျနော်တို့ 20 ဒေါ်လာဘီလျံနှင့် ပတ်သက်. လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကပုံမှန်ရှိထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုရုပ်ရှင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဖုံးအုပ်ပေါင်းလဒ်သည်။ သို့သျောကြှနျုပျတို့အရာအားလုံးနေသမျှကာလပတ်လုံးတဦးတည်းကလုပ်ဖို့ကျွမ်းကျင်မှုရှိပြီးအဖြစ်အများကြီးစျေးသက်သာသည်အဘယ်မှာရှိဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ကြောင့်ဖြစ်စေမည်။ ဘုရားသခင့ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းသာအကြီးအကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းနှင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်အကြောင်းကို 1.9 သန်းဒေါ်လာကုန်ကျမည်။ ဤကဲ့သို့သောဖော်ပြထား, ကုန်ကျစရိတ်ဒါကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။
© Ivet ဖက်ရှင်
"Black ကဖိုင်များ" မှတစ်ဦးက 10 မိနစ်ကောက်နုတ်ချက်
Facebook ပေါ်မှာ Luisa Grigorovа
ဇါတ်သူမ, အတတ်ပညာ, ပုံစံ, ရုပ်ရှင်, ထုတ်လုပ်သူ | | rating:5/ 30